Na-eto eto dracaena: esi akụ, elekọta, ifati, gbaa - Osisi - 2020
Dracaena na-esi ísì ụtọ - ịkụ ya na ilekọta ya
Dracaena Fragrans ma ọ bụ Frag (isi) enweghị nkọwa nke ịhapụ. Ọdịbendị na-eto n'Ọnyịnya. N'ụlọ ọnọdụ, osisi ahụ adịkarịghị blooms, ọ toro n'ihi okpueze e ji achọ mma. N'elu elu, dracaena yiri obere nkwụ. Ọ dị mfe ilekọta ifuru.
Kedu ụdị dracaena na-esighi ike dị ka ya, nke ezinụlọ ọ bụ
Akwụkwọ nke ahịhịa ahụ toro ogologo, sie ike, nwere okirikiri okpo, rapara n’elu akpati ahụ gburugburu. Agba ahụ na-adabere na dracaena dịgasị iche iche. Uwe nwere ike di iche iche, site na edo edo n’enwu gbaa rue ogwurugwu gbara ọchịchịrị.
Odowe odo odo anya ete mara nma nke ukwuu
E nwere ọdịnala nwere ụdị mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ okpukpu abụọ. N'ime okooko osisi dị n'ime ime, veins nke acha ọcha ma ọ bụ ọchịchịrị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-ahụ nke ọma na akwụkwọ akwụkwọ. A na-ekpughe ogwe osisi toro eto.
A na-anakọta okooko osisi na-esi ísì ụtọ n'ọtụtụ inflorescences spurtical, nke dị n'akụkụ ogologo peduncle. Ahịhịa ahịhịa amị na-eto n'ụzọ dị ngwa.
.Dị dịgasị iche
Ndị fụlatọ ndị Russia na-akọ ụdị mkpụrụ osisi iri abụọ dị ụtọ. Ihe ọkụkụ niile dị mma maka ịkọ ihe n'ime ụlọ. Nkọwa nke iche iche:
Dracaena compacta nwere ezigbo nlekọta na-eto ruo m 2. Perennial nwere okpueze mara mma, nke e guzobere site na akwụkwọ akwụkwọ osisi toro ogologo.
Yellow Coast. Omenala nwere okpueze na-agbasa. Akwụkwọ nke cultivar Yellow na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na odo. Perennial na-eto ruo 2m. n'ịdị elu.
Lemọn Lemọn Dracaena. Na mbu, obere kọmpi na-eji nwayọọ nwayọọ ghọọ osisi. Ọdịbendị nwere nlekọta kwesịrị ekwesị esịmde mpe mpe akwa lime dracaena na-ese na agba niile nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, odo na milky. Dracaena Lemon na-ekpudo isi na-adịghị mma.
Massangeana. E jiri ya tụnyere ụdị dracaena ndị ọzọ, ọdịbendị a na-agwakọta. Ogwe ahụ na-eto ruo 1.5 m. Ndị na-ahụ maka ntụ ọka hụrụ Massangejan n'anya maka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha odo odo na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-adịchaghị mma ya na eriri dị n'akụkụ efere ahụ.
Golden Coast. Ifuru ime nwere ihe dị elu n’agbata mita 1.5 ruo 1.5.
Malaya. Osisi dị egwu nwere okpueze na-acha ọbara ọbara. N’ịdị elu, dracaena nke ụdị a ruru mita abụọ. Gburugburu, ọ bụghị ogologo ogologo ka etinyere na onu ire. Agba dị nso na etiti ahụ dịkarịsịrị acha ọcha, ndụmọdụ nke efere ahụ nwere agba akwụkwọ ndụ juru.
Lemọn Lemọn Dracaena
Ngwongwo na-agwọ ọrịa
N’ime ihe mepụtara na ahụ mmadụ, ihe ọ draụ draụ dracaena na-esi ísì ụtọ yiri nke Aloe Vera osisi a ma ama n’ịgwọ ọrịa. A na-eji ihe ahụ eme ihe maka nkwadebe nke ọgwụ na-agwọ ọrịa nke na-akpali ọgwụgwọ ngwa ngwa nke ọnya.
Ifuru Dracaena Sander - Plagha na Nlekọta
Isi Njirimara ọgwụ mere na ndabere nke ọdịbendị:
mụbaa ọgụ mgbochi;
nwee mmetụta antioxidant;
nyere aka mee ka akwara obi sie ike.
Ndị na-agwọ ọrịa ọdịnala na-atụ aro iji ihe ọ juiceụ draụ dracaena mee ihe iji belata mgbu nkwonkwo. A na-eji obere kompịtị mee ihe iji belata ọnọdụ nrụgide.
Mara! Ọ bụrụ na ịgbakwunye ngwaahịa ahụ na shampoo ma ọ bụ ntutu ntutu, ị nwere ike inye ntutu ahụ mma hue ọla edo mara mma.
N'ime ọgwụ ndị mmadụ, a na-eji nkwadebe dabere na Frag dracaena na-agwọ ọrịa akpụkpọ na ọnya afọ. Nzube nke a, a alcoholụ mmanya na-aba n'ime ihe ọ plantụ plantụ osisi ahụ. Ọgwụ dị mma maka ịgwọ olulu ọnụ. Ọgwụ ahụ na-ebelata mbufụt, na-enwe mmetụta astringent na eriri afọ. Ejiri ya maka afọ ọsịsa.
Nke a na-adọrọ mmasị! E si Canary Islands bute Dracaena Russia. N'ebe ahụ, a na-akpọ ya osisi dragọn, na mmiri ọ resụ resụ resinous nke acha ọbara ọbara nke na-apụta n'osisi ahụ, a na-akpọ ọbara nke dragọn.
Njirimara nke ilekọta ihe ojoo Dracaena n'ụlọ
Kedu ka dracaena si acha ọkụ - ụdị dị a, nlekọta kwesịrị ekwesị
Omenala ahụ enweghị nkọwa dị na ịhapụ. Imle ụdị dị ugbu a na Russia ka a na-ata site na ịzị ya na ụlọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma na -eme ka ọ dị ogologo na microclimate nke ime ụlọ.
N'oge ọkọchị, ifuru chọrọ okpomoku nke + 19 ... +25 Celsius. N'ime ime ụlọ ọkụ, ị ga-eme mmiri ugboro ugboro ma fesa osisi ahụ. N'oge oyi, ifuru na-adị mma n'oge oyi + 15 ... +19 Celsius. Ọ bụrụ na ọ daa n'okpuru +10 Celsius C, osisi ahụ na-arịa ọrịa. N'oge oyi, ịkwesịrị ichebe dracaena site na draịva.
Dracaena bụ ahịhịa na-ama mma. Ihu Sun nke chere ihu n’ebe ọwụwa anyanwụ kwesịrị ya. N'oge ọkọchị, a chọrọ igbochi ohia site na ụzarị ọkụ. Iche-iche na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-anabata ndo nke ndo, na-agbanwe agbanwe na ọkụ adịghị mma nwere ike hapụ ụcha njirimara ha.
Windo ọma nwere ezigbo ọkụ ga-adabara ifuru
Mmiri na spraying
N'ịbụ ọdịbendị ebe okpomọkụ, dracaena na-esi ísì ụtọ hụrụ iru mmiri. Shouldgbara kwesịrị ịdị kwa mgbe, mana agafeghị oke. Mmiri chọrọ iguzo, okpomọkụ ụlọ.
N'oge okpomọkụ, a na-enye ifuru ahụ mmiri ugboro abụọ n'izu, n'oge oyi - naanị 1 oge kwa izu. Ọ bụrụ na ite ahụ dị nso na ngwa ọrụ kpo oku, a na-enye ifuru ya mmiri n'ọnọdụ udu mmiri, a ga-awụ ya mmiri ugboro abụọ kwa ụbọchị yana akwụkwọ mmachi.
Mgbe ịgbara mmiri, steeti ite ụrọ na-eduzi ha. Ekwesịrị iwepụta akụkụ mmiri ọzọ ma ọ bụrụ na ọ ga-akpọ nkụ 2-3 cm. Ọ dị mkpa ịtọghe ala tupu ịgba mmiri, nke mere na mmiri ahụ na-asọghachi nke ọma na mgbọrọgwụ.
Attentionaa ntị! Istụbiga ala ókè na-eduga ná ire ere. Anaghị anabata mkpo, ebe ọ bụ na ifuru nwụrụ n'ihi ụkọ mmiri.
N'ime ime ụlọ nwere ikuku kpọrọ nkụ, a na-edobe saucer na mmiri n'akụkụ osisi ahụ, a na-efesa okooko osisi onwe ha kwa ụbọchị site na karama ịgba, mana echefughi iji fụchie ya. Ebumnuche ndị a bụ maka ịba ụba iru mmiri ikuku.
A na-etinye ite nwere bushes n'ime ebe ndị a na-awụnye mmiri kwa ụbọchị. Ọ dị mkpa ka etolite akwa mmiri gravel na ala nke akpa ifuru.
Omenala-mmiri hu n'anya choro igba mmiri
Enwere ike ịzụta ala Dracaena na ụlọ ahịa ọkachamara. Ngwakọta kwesịrị ekwesị maka nkwụ.
N'onwe ya, a na-eji ala ndị mejupụtara ya eme ihe:
ala sitere na akwa ifuru - akụkụ 3;
peat na ájá osimiri na 1 akụkụ.
A na-etinye obere unyi n'ala ma ka mgbọrọgwụ ghara iwe iwe. A na-edobe obere iberibe brik na ala nke ite iji meziwanye ikike nke ala.
A na-etinye ihe ndị bara uru na ala site na March ruo Septemba otu ugboro kwa ụbọchị 10-14. Omenala maara nke ọma na nri nke fatịlaịza organic na ngwakọta ịnweta.
N'oge oyi, achọrọ akwa akwa otu ugboro n'ọnwa. A na-ahọrọ usoro dị mgbagwoju anya nke nwere obere phosphorus dị ala.
Njirimara nke nlekọta oge oyi, oge ezumike
Dracaena deremskaya - ịkụ ahịhịa na nlekọta
N'oge oyi, osisi ahụ chọrọ okpomọkụ nke +15 ruo +19 Celsius. Ahịhịa obere mmiri, mana ekwenyeghị ka ala nke dị na trays ahụ mee ka ọ kpọọ nkụ. A na-eme akwa akwa akwa otu ugboro n'ọnwa.
Dị Mkpa! Ifuru ahụ anaghị ajụ ajụ ma ọ bụrụ na ọ nọ n'ime ụlọ ebe a na-echekwa ihu igwe ikuku mgbe niile karịa +20 Celsius.
N'ụlọ, okooko osisi dracaena bụ ihe na-adịghị ahụkebe, mana, dịka nchọpụta nke ndị na-elekọta ubi si dị, mkpụrụ osisi dracaena na-esikarị ike karịa ụdị ndị ọzọ. N'oge okooko osisi, osisi ahụ na-esi ísì ụtọ siri ike. Isi ahụ yiri isi ahịhịa nke ahịhịa amị.
Ifuru nke omenaala di obere, tubular, anakọtara na inflorescences gburugburu. Egwuregwu fuloffy agbadoro na ogologo peduncle. A na-ese ifuru na mmiri ara ehi-acha ọcha, na-acha akwụkwọ ndụ-acha ọcha ma ọ bụ edo edo.
Nke a na-adọrọ mmasị! Okooko osisi na-emeghe n’abalị. N'ehihie, etuto ahụ na-emechi.
Mgbanwe na nlekọta okooko
Mgbe osisi furula, ị gaghị enyefe ya ebe ọzọ. Buds nwere ike crumble. A gaghị etinye fatịlaịza ukwuu. Mgbe ịchọrọ ịgba mmiri mgbe niile.
A na-ewepụ ome na akwụkwọ ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ome ndị ahụ dị ogologo, osisi ahụ wee malite iyi ihe na-adịghị mma. Osisi kwesiri iyi nkwụ. Osisi nwere ike idobe okpueze.
A na-ebipụ elu nke mere na akwụkwọ anọ dị mma na-anọgide na nkwụ ahụ. A na-eji sọlfọ na-ete ebe dị mma ma na-ete ya. A na-ewepụ ihe nchekwa ahụ mgbe ọdịdị nke ome n'akụkụ.
Otu esi dracaena na-esi ísì ụtọ
Enwere otutu uzo iji nweta ifuru. Maka ndị Russia, nhọrọ kachasị ọnụ maka ịgbasa ihe ọkụkụ bụ mkpọrọgwụ nke ahịhịa.
Inweta mkpụrụ nke gị siri ike, ebe ọ bụ na dracaena adịghị ahụkebe n'ime ụlọ. A na-azụta ihe ọkụkụ site na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị.
Tupu agha mkpụrụ, a na-etinye mkpụrụ ahụ na nri edozi nke na-akpali uto. A ga-eme ka mmiri dị ọkụ ruo + 30 Celsius. A na-etinye mkpụrụ kwadebere n’ala maka ahịhịa nkwụ. Ruo mgbe mkpụrụ osisi pupụtara, a na-edebe ihe ọkụkụ n'okpuru ihe nkiri ahụ.
Oge izizi nwere ike ịpụta mgbe ụbọchị 30-40 gasịrị. A na-ewepụ ihe ndozi mgbe osisi na-eto eto ruru 5-6 cm n'ogo. Mgbe nke a gasịrị, a ga-akụ mkpụrụ osisi ahụ.
Site na azumahia siri ike, a na-ebipụ ọtụtụ iberibe site na 3 ruo 5. cm ọ bụla kwesịrị inwe site na 2 ruo 4 buds.
Dị Mkpa! A na-etinye mpempe mkpanaka maka ịgbanye ya na mbara.
A na-ebipụ ogbugbo ahụ site n'otu akụkụ na aka ahụ ma tinye ebe ahụ ekpughere na ala. A na-eji ite ma ọ bụ karama kpuchie osisi. A na-agba ahịhịa mgbe niile ma na-echebe ya site na ìhè anyanwụ. Oge izizi ga-apụta n’ụbọchị 30-45. Cannweghi ike iwepu griin griin ala ruo mgbe osisi siri ike.
Mgbasa nke ọdịbendị site na ibe
Na ogwe dị n'okpuru elu, a na-eme obere mbepụ na cortex. A na-eji polyethylene kpuchie akụkụ nke akpati ahụ, nke ịchọrọ ịmepụta obere akpụ nke peat mmiri. Mgbe ihe dị ka ụbọchị iri atọ gasịrị, mkpọrọgwụ ọhụrụ malitere na pouch. A na-ebipụ elu nke isi nke nwere usoro mgbọrọgwụ ọhụụ. A na-etinye osisi ọhụrụ n'ime ite dị iche.
Nhọrọ ndi ozo
A na-ebipụ elu ya na azuokokoosisi 10-15 cm ka ifuru A na-agwọ ya site na unyi. A na-akụ akụkụ apical dị na peat. A na-agba ahịhịa ahụ mgbe niile, na -emekwa griin haus n’elu ya.
Mgbe ohia tolitere, a na-ebuga ya na nnukwu ite. Na mgbọrọgwụ, ya na oke ala, na-agafere ọzọ akpa. Ekpuchicha ahihia ahu bu ahihia ohuru, kpuchie brik na icheku ebe ahu. Enweghi ahihia na - eduga nbibi.
Dị Mkpa! A na-atụgharị ifuru site na ntụgharị. Ala kwesịrị ịbụ otu ihe mejupụtara ya na mbụ.
Nsogbu enwere ike na-etolite na ọrịa
Dracaena nwere ike ịrịa ọrịa, nke nje na-alụso ya ọgụ. Site na ihe ịrịba ama nke mpụga, ha na-ekpebi mkpa mgbanwe maka nlekọta.
Discards buds na epupụta
Enwere ike inwe ọtụtụ ihe kpatara ọnọdụ a:
A na-eme ka ifuru ahụ gaa ebe ọzọ.
Ime ụlọ ahụ kpọrọ nkụ.
Osisi ahụ enweghị nitrogen.
Ihe ọzọ kpatara ya bụ enweghị mmiri. Ọtụtụ mmebi na okooko osisi ụlọ na-esite na drafts.
Ọdịdị nke ìhè, ntụpọ akọrọ na akwụkwọ ya na-egosi ntachu. Epupụta na-eme ka mmiri ghara ịmị ihe na-edozi ahụ.
Ndụmọdụ ahụ kpọrọ nkụ n’elu akwụkwọ
Atụmatụ nke akwụkwọ ya kpọrọ nkụ ma ọ bụrụ na osisi ahụ enweghị mmiri mmiri zuru ezu. N'ime ụfọdụ ọrịa na-efe efe, otu ihe mgbaàmà ahụ dị.
Ala akwụkwọ na-apụ n'anya
Epupụta mkpụrụ osisi na - emetụta nje ndị ọzọ. Nwere ike iwepụ mealybugs ma ọ bụrụ na ị na-asa mmiri mgbe niile na mmiri dị ncha. Ha anaghị amasị pesti spraying with gal infusion.
Akwụkwọ ndị dị n’ọhịa ahụ malitere nkụ
Nje ndi ozo na ebuso dracaena agha:
Ọ bụrụ na achọtara ahụhụ, a na-eji ọgwụ kemịkal agwọ bushes.
Enwere ike ịme ọnwụ nke osisi site na ịgbara mmiri n'oge oyi. Ọnọdụ okpomọkụ dị n'okpuru +15 Celsius C na-emebi ifuru.
Dị Mkpa! Mgbe mmiri na-eguzo mgbe nile n’ime ite ahụ, mkpọrọgwụ ya na-agbaze ma ọdịbendị na-ala n’iyi.
Ihe ịrịba ama na nkwenkwe ụgha
Dabere na akụkọ mgbe ochie ndị India, ihe ọcaụ draụ dracaena mejupụtara ọbara nke dragọn na enyí. A na-akpọ ifuru osisi osisi obi ụtọ. Mgbe ọ tolitere, udo na ọdịmma ihe onwunwe abịakwute ezi na ụlọ. Dragrant dracaena nwere ike igosipụta ike na-adịghị mma, chebe ndị bi n'ụlọ, anya ọjọọ na ike ọjọọ.
Ihe nkiri pụrụ iche dabara adaba n'ime ime ọfịs, ụlọ. Ifuru ahụ na-adị mfe ilekọta. Iji nweta ihe ọkụkụ ọhụrụ, o zuru ezu itinye otu mkpisi n’ala. Site n'àgwà ndị a, ọdịbendị enwetaala ewu ewu n'etiti ndị na-akụ ifuru Russia.